आगामी जेठ महिनासम्म दुई वाइडबडी विमान आइपुग्छः सुगतरत्न कंशाकार [अन्तर्वार्ता]
राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर व्यवस्थापनका कारण राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम धरासायी बन्दै गइरहेको छ । नयाँ विमान खरिद र रणनीतिक साझेदार ल्याउने चर्चा चले पनि समयमा काम नहुँदा निगम बर्षेनी घाटामा सञ्चालन छ । निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंशाकारसँग लोकान्तरका लागि मनीषा अवस्थीले नयाँ विमान खरिद प्रक्रिया लगायत निगमका भावी योजनाको विषयमा कुराकानी गरेकी थिइन् ।
नेपाल वायुसेवा निगमले अहिले के गरिरहेको छ ?
नेपाल एयरलाइन्सको व्यवस्थापन अहिले परिवर्तन भएको छ । आन्तरिक र बाह्य उडानतर्फ अलिकति विस्तार गर्ने गरी हामी लागेका छौं । आन्तरिक उडानतर्फ चिनियाँ विमान विस्तार गर्ने योजनाअनुसार अगाडि बढिरहेका छौं । त्यसका लागि दुईवटा चिनियाँ जहाज अब केही महिनाभित्र नेपाल आउँदैछ । वायुसेवा निगमले २८ वर्षसम्म एउटा पनि विमान ल्याउन सकेको थिएन । निकै ठूलो संघर्षपश्चात अहिले हामी नयाँ वाइडबडी एयर भित्र्याउन लागेका हौं ।
नयाँ आउने विमानको एक वर्षसम्म चलाउन पाइलट र इन्जिनियरको व्यवस्थासमेत हामीले गरिसकेका छौं । अहिले हामी घाटामा रहेको वायु सेवा निगमको व्यापार बढाउनमै केन्द्रित छौं । यही योजनामा हामी निरन्तर जुटिरहेका छौं ।
एयरबस खरिद प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । आठ अर्ब पहिलो किस्ता बुझाएको दुई महिना भइसक्यो । जम्मा २४ अर्बमा खरिद सम्झौता भएको हो । दुईटै वाइडबडी फ्रान्समा निर्माणको प्रक्रियामा छ । हाम्रो अनुमान अनुसार आगामी २०१८ अप्रिल–मेसम्म दुईटै आउँछ ।
नयाँ एयरबस ल्याएपछि नयाँ गन्तव्य कहाँ थपिनेछन् ?
गन्तव्य तय भइसकेको छ । तत्काल जापान, कोरिया र साउदी अरेबियामा हाम्रो गन्तव्य थपिनेछ । अहिले भएको गन्तव्यमा पनि उडान संख्या बढाउने योजना छ । नेपाल एयरलाइन्सले अहिले पनि मलेसियाको क्वालालम्पुरमा उडान गरिरहेको छ । नयाँ विमान आएपछि थप्न खोजेको असाध्यै महत्वपूर्ण गन्तव्य साउदी अरबिया हो । दमाम वा रियाद, जहाँ झण्डै ५ लाख नेपाली छन् । त्यहाँबाट सिधा उडान भयो भने नेपालीहरूलाई ठूलो सुविधा हुन्छ । त्यसैले नयाँ विमान आएपछि साउदीमा उडान थाल्छौं ।
खाडी मुलुकहरूमा त बजेट एयरलाइन्सहरू पनि छन् । उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कत्तिको सजिलो छ ?
बजेट एयरलाइन्सका कारण धेरैतिर फरक परेको छ । तर, बजेट एयरलाइन्सका कारण ठूलो असर भने पर्दैन । नेपाल एयरलाइन्स दुबई, दोहा, क्वालालम्पुरमा पनि राम्रै चलिरहेको उदाहरण छ । आम मानिसको आफ्नै किसिमको रुचि हुन्छ । अलिकति मंहगोसँग डराउँदैनन् । बरु सुविधा हुनुपर्छ भन्नेहरू पनि प्रशस्त छन् ।
सुरक्षाको दृष्टिकोणले नेपाली हवाई आकाश करिब ४ वर्ष कालो सूचिमा रह्यो, त्यसको असर नियमले पनि व्यहोर्नु पर्‍यो ?
हवाई सुरक्षा पैसासँग तुलना हुँदैन । हवाई सुरक्षाबारे मूल्याङ्कन गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई पैसा कति कमाएको छ भन्ने कुरासँग मतलब नै हुँदैन । उसका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा यात्रुको सुरक्षा हो । त्यही हेरेर हामी असुरक्षाको सूचीमा परेका थियौं । अहिले हामी त्यसबाट उम्के पनि ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । त्यसका लागि नेपाल वायुसेवा निगमले दुईजना विशेषज्ञहरू ल्याएर काम गर्ने नीति लिइसकेका छौं । हवाई सुरक्षालाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनेछौं ।
वायुसेवा निगमले लामो समयदेखि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विषयमा बहस गरिरहेको छ, प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने कुरा कुनै एकजना व्यक्तिले भनेर हुने कुरा होइन । वायुसेवा निगमको एमडीले मात्रै भनेर हुने कुरा पनि होइन, कुनै मन्त्रीले मात्रै भनेर पनि हुँदैन । यसका लागि सबै पक्षकोे सहमतिमा सरकारकै निर्णय हुनुपर्छ । त्यो ६ वर्षअघिको निर्णय बोर्डबाट पास भएर अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगेको थियो । अर्थ मन्त्रालयतिरै छ । त्यसमा मैले अहिले केही भन्न मिल्दैन ।
साझेदार ५१ प्रतिशत नै शेयर दिएर ल्याउनुपर्छ भन्नुभएको थियो, यसले वायुसेवा निगमको पहिचानमा असर गर्दैन ?
पहिलो कुरा त यो विषय मैले मात्रै बोलेर केही हुँदैन । अर्थ मन्त्रालयतिर रहेको फाइलबारे के निर्णय हुन्छ, समयले भन्ला । तर मेरो विचारमा ५१ प्रतिशतभन्दा कममा कोही आउनेवाला पनि छैन ।
जहाँसम्म हाम्रो अस्तित्वको कुरा छ । त्यसमा ध्यान दिनैपर्छ । यो अत्यन्तै संवेदनशील निर्णय पनि हो । धेरै कुरा विचार गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ ।
निगमका आगामी योजना के छन् ?
यो दुईवटा एयरबस आउने बित्तिकै हाम्रो टिम अर्को दुईवटा न्यारोबडी किन्ने प्रक्रियामा जुट्छ । यो तीन वर्षे योजना हो । न्यारोबडीका विमान आएपछि तिब्बत ल्हासामा उडान गरिनेछ । त्यसपछि हरेक वर्ष एउटा विमान थप्दै जानुपर्छ ।
नेपाल एयरलाइन्सले गन्तव्य थप्दै गएपछि हवाई भाडा सस्तो हुँदै जान्छ । अहिले एसियाको सबभन्दा महङ्गो हवाई भाडा भएको शहर काठमाडौं हो । अमेरिका, जापान, अष्टे«लिया लगायतका देशबाट नेपाल आउन महङ्गो, भारत, थाइल्याण्ड, इण्डोनेसिया लगायतका देशमा जान सस्तो भएकाले पर्यटकहरूको सङ्ख्या बढाउनै नसकिएको यथार्थ हो ।
नेपाल वायुसेवा निगम र नेपालको सिंगो पर्यटन उद्योगबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । हामीसँग जहाजको संख्या बढ्यो, गन्तव्य बढे भने पर्यटन उद्योग फस्टाउँछ ।
वायुसेवा निगमको स्तरोन्नति हुनु भनेकै पर्यटन उद्योग पनि फस्टाउनु हो । समग्रमा आर्थिक विकासको एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानिएको पर्यटन क्षेत्र फस्टाउनु नै समग्र नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नु हो । त्यसैले अहिले हामी नेपाल सरकारसँग गुहार मागिरहेका छौं । अहिले सरकार ग्यारेन्टी बसेकै कारण हामीले जहान किन्न सम्भव पनि भएको हो ।